Nigeria oo ciidan iyo markab dagaal u direyso Gambia - BBC Somali
Image caption Ciidammada Gambia waxaa laga qiyaasaa tira haan 900 oo askeri oo kali ah
Nigeria ayaa xaqiijisay in markab dagaal ay u dirtay Gambia taasoo qeyb ka ah dhoolatus iyo diyaargarow ay dalalka galbeedka Afrika ugu jiraan inay ciidan ugu diraan Gambia.
Madaxweynaha la doortay ee dalka Gambia Adama Barrow oo hadda ku usgan dalka Senegal ayaa qorshuhu ahaa in la dhaariya Khamiista.
Balse madaxweyne Yaxya Jammeh ayaa dhaliilsan natiijadii doorashada, wuxuuna doonayaa in doorasha kale la qabto.
Talaadadii ayay wakaaladda wararka ee Reuters ku warantay in waddamada galbeedka Afrika ay diyaarinayaan milatari iskudhaf ah oo dalka Gambia loo diro si ay ugu khasbaan Jammeh inuu xilka baneeyo.
Afhayeen u hadlay ciidammada cirka ee dalka Nigeri Capt Dahun Jahun ayaa sheegay in dalkiisa uu ku tabarcay 200 oo ciidan oo qeyb ka noqon doono ciidammada loo dirayo dalka Gambia.
Baarlamaanka Gambia ayaa dhinca kale u codeeyay in saddex bilood lagu kordhiyo muddada xilka uu haynayo madaxweyne Yahya Jammeh, kaasoo looga fadhiyay in beri uu madaxtinnimada ku wareejiyo hogaamiyaha mucaaradka Adama Barrow.
Ayadoo xiisadda siyaasadeed ee Gambia ay cirka isku shareereyso, ayaa waxaa dalkaasi laga daadgureynayaan kumannaan dalxiisayaal ah oo u dhashay Britain iyo Netherlands, kuwaasoo diyaaraddo khaas ah loo kireeyay.